🥇 ▷ Suuqa isbeddelada ayaa soo laaban doona 2022 | Xusuusqor Geek ✅
Suuqa isbeddelada ayaa soo laaban doona 2022 | Xusuusqor Geek
Waa rasmi, Transformers ayaa ku soo laabaneysa shaashadeena. Shaqada uu bilaabay Michael Bay 2007dii waa mid ka fog inuu sheego eraygiisii ​​ugu dambeeyay wuxuuna ku noqon doonaa labo la sii daayo. Midkood wuxuu ku degi doonaa qolal mugdi ah sannadka 2022, sida muuqata xagaaga.
Paramount waxay sii wadeysaa inay ku duuleyso shaashadeena Transformers. Shirkadda ayaa ku dhawaaqday in filim cusub uu gaari doono shineemooyinka mugdiga ah sannadka 2022, adigoon bixin faahfaahin dheeraad ah. Haddii aan hore u ogaan lahayn in laba filim oo muuqaal ah ay ku jireen barnaamijka, ma ogin in soo-celintani noqon doonto mustaqbalka dhow. Laba mashruuc ayaa kujira horumar, mid waxay la jaan qaadayaan Bumblebee kan kalena wuxuu diirada saarayaa caalamka ee taxanaha taxanaha ee Beast Wars. Idaacada TF1 ee dalka faransiiska, waxay na dhex gelisaa wadnaha dagaalka udhaxeeya Maximals iyo Saadaaliyeyaasha. Baaqaas ka dib, su’aal ayaa weli taagan : Labadan filimood midkee ayaa la sixi doonaa bisha Juun 2022? Waxaa lagama maarmaan noqon doonta in sharkeeda loo dulqaato sabirka maadaama Paramount aysan macluumaad badan ka bixin mawduucan. Waan ognahay, si kastaba ha noqotee, in qoraalka qoraalka ah ee la aaminay Jory Harold, oo ka shaqeynayay Bumblebee, iyo James Vanderbilt, oo iyagu si gaar ah loogu leeyahay Spider-Man oo la yaaban waxaa qoray Mark Webb.
Soo laabashadu waa qatar halis u ah shirkada, oo kaliya ururtay $ 468 milyan xafiiska sanduuqa ee shirkadda Bumblebee. Waxaa la rumeysan yahay in guusha filimka isku dhafka ah ee filimka 2018 ay u aaseen rogga robot-ka si wanaagsan, laakiin Paramount uma muuqato inay tiri ereyadeedii ugu dambeysay. Waxay u badan tahay inay rabto inay ku celiso muuqaalka ‘opus-ka saddexaad’, kaas oo $ 1.12 bilyan oo doollar ku soo kordhisay caalami ahaan Istuudiyaha ayaa ku qasbaya inay saxamada ku dhex daraan kuwa waaweyn isla markaana ay shaqaaleysiiyaan maareeyaha duulista badan si ay u hoggaamiyaan qoob ka ciyaarka robots. Dhinaca, dhanka kale, wareegtada ayaa sariirta saarneyd sidaas darteedna waxaa la filayaa in lagu arko dad qurux badan. Waxaan si muuqata u arki karin Hailee Steinfeld maqaarka Charlie Watson iyo John Cena taas oo ah Agent Burns.